AMISOM oo sheegatay iney Alshabaab badan ku leysay duqeyn diyaaradeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kismaayo – Mareeg.com: Ciidamada Kenya ee qeybta ka ah AMISOM ayaa sheegay iney duqeyn xagga cirka ah ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose, ayna ku dileen rito ka tirsan Alshabaab.
Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa shaaciyey in 80 ka tirsanayd dagaalyahannada Al-Shabaab ay ku dileen duqeyn dhanka cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka ee Kenya ay ka geysteen deegaannada Kudha iyo Caanoole ee gobolka Jubbada Hoose Axaddii shalay.
Qoraal ay AMISOM soo saartay ayey ku sheegtay in duqeymaha lala beegsaday saldhigyo ay maleeshiyadu ku laheyd deegaannadaas, warku wuxuu intaas ku daray in 30 kamid ah kooxda ay ku dhinteen deegaanka Caanoole, inka badan 50 kalana ay lagu dilay duqeyn ka dhacday Kudha.
Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya danjire Mahamat Saleh Annadif ayaa sheegay in weerarradaas ay u dhaceen sidi loogu talo galay, isaga oo tilmaamay in shaqada ciidamada AMISOM ay tahay in ay soo afjaraan fikirka Alshabaab.
Weerarka ay sheegatay AMISOM iney ku dishay tiro badan oo Alshabaab ah ayaa imaanaya iyadoo todobaadkii hore ALshabaab gobolka Xeebta Kenya ku dileen ilaa 63 Kenyan ah.
Alshabaa weli kama jawaabin warka kazoo baxay AMISOM ee ah in duqeyn diyaaradeed lagu dilay tiro badan oo ka tirsan Alshabaab.